खोले सागको व्यावसायिक खेतीको सुरुवात - इ-दैनिकी
खोले सागको व्यावसायिक खेतीको सुरुवात
पुस २८, २०७८ १७;०२ मा प्रकाशित
बागलुङ नगरपालिका–३ रातामाटाका छ किसान अहिले खोले सागका उत्पादनमा जुटेका छन् । झण्डै डेढ रोपनीमा साग लगाइएको बैकुण्ठ सापकोटाले जानकारी दिए । छिपछिपे खेत र मूल वरिपरि खोले साग पहिलेदेखि नै उम्रेपनि रातामाटावासीलाई उती वास्ता थिएन । कतिलाई त यो खाने साग हो भन्नेसमेत पत्तो पाउँथेनन् ।
अलिअलि गर्दै टिप्ने, खाने चलन बस्यो । त्यसको मिठोमसिनो स्वाद सबैले रुचाए । खोले सागले विस्तारै महत्व पायो । शहरछेउको बस्ती भएर पनि होला त्यहाँका लागि खोले साग नौलो थियो । उनले पानीको मूल र खेतको सिममा उक्त साग फस्टाउने गरेको बताए । सापकोटासँगै प्रेम केसी, सरोज पौडेल, मनोज शर्मा, देवेन्द्र किसानलगायत खोले सो सागका खेतीमा लागेका छन् ।
प्रतिकिलो सागको रु. एक सय र आधा किलाको रु. ५० मूल्य राखेका छन् । ग्राहक आएमा खेत या घरबाटै साग उपलब्ध गराउँछन् । उत्पादन बढ्दै गएमा बजार पठाइने किसान सापकोटाले जानकारी दिए । सागको खेती गरेको थाहा पाएपछि बजारबाट माग आउन थालेको उनको भनाइ छ । बागलुङ बजार नजिकै भएकाले बेच्नलाई समस्या छैन ।
तरकारी पसलले पनि किसानबाट साग उठाउन सक्छन् । तरकारी तथा फलफूल व्यवसायी विजय आलेले अहिले कास्कीको लुम्ले र नयाँपुल क्षेत्रबाट खोल साग बागलुङ बजार आउने गरेको जानकारी दिए । जिल्लामा खोले सागको व्यावसायिक खेती खासै नभएकाले बाहिरबाट ल्याउनुपरेको उनको भनाई छ ।
खोले सागको सेवन कब्जियत, कुपोषण, आँखाको समस्या भएकालाई लाभदायक हुने ठानिन्छ । खोले सागमा रोगव्याधि लाग्ने खतरा पनि ज्यादै न्यून हुन्छ । कुनैताका पहिचान र महत्व नपाएर त्यसै नास भइरहेको खोले सागले बजार पाउँदा किसान खुसी छन् । खोले साग कमाइको स्रोत बनेको छ ।रासस